Sarudzo yeMutauriri weParamende Yotsviriridza
Kurume 21, 2011
Bato reMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube rinoti harisi kuzokwikwidza musarudzo yekutsvaga mutauriri wedare reparamende sezvo riine chigaro chemutevedzeri wemutauriri wedare re House of Assembly.
Mutauriri webato iri, VaNhlanhla Dube, vanoti bato ravo raona zvakakodzera kusakanganisa muchato warinoti uri pakati peZanu PF neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, richiti mapato maviri aya anenge ari kuratidza kudyidzana zvakanaka zvichitevera kutsigira kwarati kwakaitwa nemapato aya mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, pahondo yavo yekurambira pachigaro chemutungamiri weMDC duku iyi.
Danho rebato iri rinenge rosiya Zanu PF neMDC inotungamirirwa naVaTsvangirai zvotatsurana pakutsvaga munhu angatsiva chigaro chakasiiwa naVaLovemore Moyo veMDC-T. VaMoyo vakabviswa pachigaro ichi nemutongo wakapiwa nedare reSupreme Court wekuti vakasarudzwa muna 2008 nenzira isina kujeka.
Pane mashoko anotiwo Zanu PF iri kutarisirwa kudoma sachigaro webato iri, VaSimon Khaya Moyo, kuti vakwikwidze chigaro ichi, ukuwo MDC-T ichitarisirwa kudzosera VaMoyo pachigaro chavo. MDC-T inoti ine nhengo makumi mapfumbamwe nenhanhatu dzine kodzero yekuvhota.
Zanu PF inonziwo ine huwandu humwe chetehwo neMDC-T, izvo zvichaita kuti mutambo uyu unakidze kutevera kana nhengo dzeMDC duku dzikasavhota.
Paramende iri kuvhurwa neChipiri, uye mitemo yedare iri inoti nhengo dzeparamende hadzikwanisi kuita basa kana pasina mutauriri weparamende.
Mukokeri weMDC yaVaTsvangirai, VaInnocent Gonese, vanotiwo bato ravo ranga richitarisira kuti nhengo yavo, VaLovemore Moyo, vanga vachizowana rutsigiro kubva kumapato ose, kwete kubva kubato ravo chete sezvo vakaratidza kugona kwavo basa.
Mukokeri weZanu PF muparamende, VaJoram Gumbo, vaudzawo Studio7 kuti bato ravo harisati raziviswa kuti hapachina mutauriri weparamende, nekudaro harisati ratanga kugadzirira zvekuti ndiyani achamirira bato.